China girazi Bhodhoro Liquor yekuzadza muchina mutsara fekitori nevatengesi | Higee
Mvura yekuzadza Machine
Zvakadaro Mvura Kuzadza Mashini
Inopenya mvura yekuzadza muchina
Girazi Bhodhoro reMvura Rizadza Muchina
Diki PET bhodhoro Yemvura yekuzadza Muchina
3-5L Mashini Ekuzadza Mvura
5 Gallon Mvura Kuzadza Mashini
Chinwiwa Kuzadza Machine
kabhoni nyoro chinwiwa yekuzadza muchina
Isina-kabhedhi chinwiwa chizadza muchina
Simba chinwiwa chizadza muchina
Jisi Hot Kuzadza Mutsara
PET bhodhoro muto wekuzadza muchina mutsara
Doro Waini Doro Kuzadza Machine
Girazi Bhodhoro Bheri Kuzadza Machine
Girazi Bhodhoro Doro rekuzadza muchina mutsara
Oiri Kuzadza Machine Line
Oiri kupuruzira muchina mutsetse
Yakakosha mafuta yekuzadza muchina mutsara
Kurapa kwemvura & Pasteurizer
kurapwa kwemvura system
Chikafu chinozadza muchina
Huchi Kuzadza Machine Machine
Chemishonga Kuzadza Machine
Sirasi Kuzadza Machine
Zvizoro Zvizadza Machine
Shampoo yekuzadza Machine Line
Chemical Kuzadza Machine
Chemical Liquid Mukombe Kuzadza Muchina
Otomatiki Linear Capping Machine
Otomatiki Cap Loader Machine
Round Bhodhoro Kunamatira Label HAY Series
Wepamusoro Kurutivi Kunamatira Label Muchina HAP Series
Kumberi uye Kumashure Side Labeler ANE Nhevedzano
Gadzirisa Position Sticker Labeler HDY Series
Yakatwasuka Sticker Labeler HAW Series
Otomatiki Mukombe Rudzi Chemical ...
Otomatiki Shampoo Kuzadza M ...
Yakakwira Kugona Sirasi Kuzadza ...
Yakakosha mafuta kuzadza machi ...
Yedu Liquor yekuzadza muchina mutsara unobatanidza kushambidza bhodhoro, kuzadza uye capping muchina mune imwe monoblock muchina. Maitiro acho anoitwa zvizere otomatiki.
Kupa Mazano: 30 Sets / Mwedzi
Trade izwi: FOB, CNF, CIF, EXW
Port: Chiteshi cheShanghai muChina
Kubhadhara izwi: TT, L / C.
Production kutungamira nguva: Kazhinji 30-45 mazuva, inofanira kusimbiswazve.
Kwikwidza Girazi Bhodhoro Whisky Filler Machine Monoblock Production Line
Iyo michina yezvinhu inosangana neiyo mvura inogadzirwa nemhando yepamusoro yesimbi isimbi, Izvo zvakakosha zvinhu zvinoitwa nenhamba-inodzorwa muchina chishandiso, uye iwo wese muchina mamiriro ari pasi pekuonekwa ne photoelectric sensor. Izvo zvine zvakanakira yakakwira automation, nyore mashandiro, yakanaka hasha kuramba, kukwirira kugadzikana, yakaderera kutadza chiyero, nezvimwe.
Tinogona zvakare kushongedzera iyo yekugadzira bheriya mutsetse nemvura yekurapa michina, pre-kurapwa musanganiswa michina sisitimu, uye kurongedza system inosanganisira shrink sleeve kunyora muchina, shrink kurongedza muchina nezvimwe seimwe tambo yakazara.
1.Screw feeder yeGirazi Bhodhoro
2.Whisky bhodhoro Kushambidza Kuzadza uye Capping Machine
whiskey yekuzadza muchina inosanganisa kuwacha mabhodhoro, whiskey yekuzadza uye kubaya mune imwe monobloc, uye matatu maitiro anoitwa akazara otomatiki. Iyo inoshandiswa mukuzadza kwemaminera emvura, yakachena mvura, uye zvimwe zvisina-kabhoni chinwiwa (Senge whiskey). Zvezvinhu zvemagetsi, tinoshandisa Mitsubishi, Omron, Schneider, Airtac, nezvimwewo izvo zvinozivikanwa mhando uye nehunhu hwakavimbiswa. Chinhu chega chega chemuchina icho chinosangana neicho mvura chakagadzirwa nemhando yepamusoro yesimbi isina simbi. Izvo zvakakosha zvinhu zvinoitwa nenhamba-inodzorwa muchina chishandiso, uye iwo wese muchina mamiriro ari pasi pekuonekwa nephotoelectric sensor, hapana bhodhoro isina kuzadza, hapana bhodhoro risina kubaya. Izvo zvine zvakanakira yakakwira otomatiki, nyore mashandiro, yakanaka hasha kuramba, yakasimba kugadzikana, yakaderera kutadza chiyero, nezvimwewo Hunhu hunosvika kune epamberi epamusoro nhanho. Iyo ndiyo sarudzo yakanakisa kune nyowani uye dzekare chinwiwa kugadzira mutsetse varidzi.
● Nemabhodhoro emutsipa anodonhedza ekuparadzira chimiro, iyo yekuendesa bhodhoro yakatsiga; inonyatsoita uye inokasira kushandisa mabhodhoro akasiyana ekuzadza mumushini mumwe chete nekugadzirisa kukwirira kweanotakura uye akati wandei ekuchinjana zvikamu.
● Iine Giravhiti yekuzadza dzidziso, yekumhanyisa mhanyisa inokurumidza uye kunyatso kukwirira; Chikamu chekuzadza chinogadziriswa.
● Nemhando yechirimo yekuwachira clipper, mabhodhoro asina chinhu anoshandurwa 180 ° padivi pegwara rinotungamira rekushambidza mukati; iyo yekugezesa kamwene inotora plum kutumbuka chimiro chimiro makomba mazhinji kushambidza bhodhoro rezasi, kugeza kugona kwakakwirira.
● Capping Machine inotora tekinoroji yeFrance, iyo capping ndeyemagineti torque; iyo cap inobata inotora kaviri inobata kuve nechokwadi chechokwadi. Iko kurongedza kuri kuchinjika, kugara torque capping hakuzokuvadze makapu uye chivharo chakanaka chakanamwa uye chakavimbika.
● Mushini wese unoshandiswa ne touch screen, inodzorwa nePLC uye frequency switcher nezvimwe, iine mashandiro asina bhodhoro isina cap yekudyisa, kumirira kana kushomeka kwemabhodhoro, kumira kana bhodhoro rakavharika kana risina kapu muhombodo inotungamira pombi.
Cap loader inoburitsa makapeti kune kapu isingakwikwidzi muchina. Iyo ine mashandiro eisina bhodhoro isina chivharo kurodha, otomatiki kutonga.
4.Beer Bhodhoro conveyor
Pashure: Girazi Bhodhoro Bheri Kuzadza Machine
Zvadaro: Water treatnebt system